Haweeney katirsan madaxda TPLF oo Hindiya lagu xidhay iyadoo wadata Dahab ay kaxaday Itobiya. | ogaden24
Haweeney katirsan madaxda TPLF oo Hindiya lagu xidhay iyadoo wadata Dahab ay kaxaday Itobiya.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in haweenay katirsan ururka talada wadanka ku amar kutaagleeya ee TPLF ay la baxsatay hanti umadeed oo aad ubadan.
Sida xogta aan kuhelayno haweenaydan ayaa ayaa la baxsatay dahab aad ubadan iyadoo doonaysay in ay ka soo iibsato wadamada dibada si ay uga samayso hanti ugaar ah iyada.
Hase yeeshee ciidanka amaanka ee wadanka India ayaa gacanta kudhigay haweenaydii iyo dahabkii ay wadatayba waxayna isla markiiba dhigeen xabsiga, ciidanka amaanka ee wadanka India ayaa aad ula yaabay dahab intaas dhan oo hal qof uu wato waxayna si dag dag ah u go’aan sadeen in ay xabsiga dhigaan.
Sida laga soo xigtay ciidanka Police ka ee magaalada Dalhi haweenaydan ayaa lasaari doonaa maxkamad kadib markuu dhamaado baadhitaanku waxaana lafilayaa in ay mudato xabsi dheer.
Haweenaydan oo magaceeda aanaan wali helin ayaa lagu sheegay in ay tahay xaaska mid kamid ah raga TPLF ugu awooda badan waxaana lasheegayaa in ay dhowr jeer oo hore hanti badan oo dahab ah dibada wadanka u dhoofisay.
Kooxda TPLF oo xaqiiq saday in uu wakhti goodii gabaabsi yahay ayaa wada boob hantiyeed waxayna kooxdu ku dadaalaysaa sidii ay hanti badan ugaysan lahaayeen dibadan wadanka halkaas oo ay doonayaan in ay dhawaan ubaxsadaan.